juin 2017 – filazantsaramada
HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA
« Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy. » (Joela 1:6). Noho izany » … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: « raha ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 26, 2017 juillet 3, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA
HARENA ANY AN-DANITRA, HARENA ETY ANTANY.
« Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manankarena ny amin’Andriamanitra. » Lioka 12:21 – Ny tsy mino ( tsy mino an’i Kristy) raha mitady vola na miasa dia ny ho an’ny tenany ihany ; ka na dia an’ny tenany aza dia ny ety antany ihany. Tsy mino izy fa misy ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 26, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HARENA ANY AN-DANITRA, HARENA ETY ANTANY.
NY TAVAN’I JEHOVAH
« Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. » Nomery 6:24-26 – In-telo eto no miverina ny teny hoe: Jehovah. Ny Ray Tsitoha, ny Zanaka mamindra fo. Ny Fanahy Masina manome fiadanana (Fiadanana no avelako ho anareo) […]
Publié parfilazantsaramada juin 16, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY TAVAN’I JEHOVAH
NY FAHEFAN’I JESOSY.
« Fa amin’ny fahefàna sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia mivoaka ireo. » Lioka 4:36b Zanaka mpandrafitra, tsy mba nianatra tahaka ny mpanoradalàna na ny fariseo Jesosy kanefa dia efa niseho sahady ny fahefàny amin’ny fampianarana; na dia mbola 12 taona aza Izy. Misongadina ny maha-tena Andriamanitra an’I Jesosy. Tena manana fahefàna Izy na […]
Publié parfilazantsaramada juin 8, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHEFAN’I JESOSY.
MANATONA NY SEZA FIANDRIANAN’NY FAHASOAVANA.
« Koa aoka isika hanatona ny seza-fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » Hebreo 4:16 Sarotra ny manatona mpanjaka: eo ny miaramila mpiambina, ary moa ve fantatry ny mpanjaka koa isika? Ny mpanjaka resahina eto dia Jehovah Andriamanitra. Fantatr’i Jehovah Andriamanitra ve isika? Ahoana no hanatonana izany seza […]
Publié parfilazantsaramada juin 2, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANATONA NY SEZA FIANDRIANAN’NY FAHASOAVANA.